गायक रन लामाले गायिका मेलिना राईलाई‘कहिले हुन्न लेट’किन भने ? भिडियोमा हेर्नुहोस् – Music Our Choice
गायक रन लामाले गायिका मेलिना राईलाई‘कहिले हुन्न लेट’किन भने ? भिडियोमा हेर्नुहोस्
सार्वजनिक भिडियोमा न्यू स्टार क्रयुको नृत्य निकै मज्जाको छ । ज्ञानेन्द्र शर्माले खिचेको भिडियोलाई अमृत चापागाँईले सम्पादन गरेका हुन् । यसअघि गायक रन लामाको ‘पिरतीको रनको’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका हुन् ।
गायिका शशिकला मोक्तानको “घुम्टो चुरा टिका” सार्बजनिक भिडियो…
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार २३:०३
दर्पण राईको “तिमीले बाटो फेरेउ अरे २” गीत सार्बजनिक
१८ मंसिर २०७५, मंगलवार १६:५५